IRashiya iphinda iqale iinqwelomoya ukuya kwiRiphabhlikhi yaseCzech, kwiRiphabhlikhi yaseDominican naseMzantsi Korea
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IRashiya iphinda iqale iinqwelomoya ukuya kwiRiphabhlikhi yaseCzech, kwiRiphabhlikhi yaseDominican naseMzantsi Korea
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Iindaba zaseMzantsi Korea • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukulandela iingxoxo kunye nokuthathela ingqalelo imeko yesifo kumazwe athile, isigqibo senziwe sokususa izithintelo kwiinqwelomoya ezihamba rhoqo nezingaqhelekanga (charter) ezivela kwizikhululo zeenqwelo moya zaseRashiya zisiya kwiRiphabhlikhi yaseDominican, eMzantsi Korea naseRiphabliki yaseCzech ukuqala nge-27 Agasti 2021.
I-Russia izakuphelisa izithintelo ezibekwe kuhambo olucwangcisiweyo lwenqwelomoya kunye ne-charter abakhweli ukusuka eRussian Federation ukuya kwiRiphabhlikhi yaseDominican, kwiRiphabhlikhi yaseCzech naseSouth Korea nge-27 ka-Agasti, iziko leengxaki zeli lizwe lokulwa ne-coronavirus libhengeze kwingxelo namhlanje.
“Ukulandela iingxoxo kunye nokuthathela ingqalelo imeko yokusasazeka kwezifo kumazwe athile, isigqibo sithathiwe sokususa imiqobo kwiinqwelomoya ezihamba rhoqo nezingaqhelekanga (charter) ezivela kwizikhululo zeenqwelo moya zaseRashiya ziye eDominican Republic, eMzantsi Korea naseRiphabliki yaseCzech ukuqala nge-27 Agasti 2021. , ”Ifundeka njalo ingxelo.
Ukongeza, iinqwelomoya ezisuka kwiSurgut International Airport ziqala kwakhona nge-27 ka-Agasti.
Ngokweziko laseRussia lokulwa ne-coronavirus, inani leenqwelo-moya ezisuka eRashiya ziye eHungary, eCyprus, eKyrgyzstan naseTajikistan ziya kunyuswa ukuqala nge-27 ka-Agasti.
Inani leMoscow-Budapest Iinqwelomoya ziya kunyuswa ukusuka kwisine ukuya kwesixhenxe ngeveki, ngelixa indiza enye ngeveki izakuvunyelwa kwezinye iidolophu. Inani leenqwelo moya ezisuka eMoscow ukuya eLarnaca nasePaphos eSipro kuya kufikelela nakwezisixhenxe, ngelixa ezinye izixeko zaseRussia ziya kuba neenqwelomoya ezine ngeveki.
Iinqwelomoya ezisixhenxe ngeveki ziya kusebenza ukusuka eMoscow ukuya eBishkek naseDushanbe. Ngapha koko, izixeko ezininzi zaseRussia ziya kucocwa ukuze zibhabhe ngeveki kwikomkhulu laseKyrgyz, ikomkhulu laseTajik, iKhujand neKulob.
Ukuhamba ngenqwelomoya ngeHungary naseCyprus kwabuyiselwa ngoJuni emva kokuqhawulwa ngenxa yobhubhane. Iinqwelomoya phakathi kweRussia neTajikistan zaphinda zaqala ngo-Epreli kwaye zabuya neKyrgyzstan ngo-2020.